2012-03-11 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Mediafire ​ဆိုက်​အ​ကြောင်း​နှင့် ​ရင်​ထဲ​က​ပြော​ချင်​တာ​လေး​များ
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး www.co.cc Free Domain name ​ဆိုက်​ပါ. Free ​အ​မြဲ​ပေး​မယ်​ပြော​ပြီး​တော့ ​နောက်​ဆုံး ​လူ​သုံး​များ​လာ​တော့ ​တစ်​နှစ်​ပဲ free ​ပေး​ပြီး​တော့ ​နောက်​နှစ်​တွေ​မှာ ​ဝယ်​ခိုင်း​ပါ​တော့​တယ်. ​လူ​သုံး​များ​လာ​တာ​နဲ့ ​တန်း​ပြီး​တော့ ​ရောင်း​စား​ကြ​တော့ ​တာ​ပါ​ပဲ.
​ဒု​တိ​ယ​က www.ning.com ​ဆိုက်​နဲ့ http://grou.ps ​ဆို​တဲ့ social network ​ဆိုက်​နှစ်​ခု​ပါ. Free ​ပေး​ခြင်း၊ ​ဆိုက်​ဒီ​ဇိုင်း​အ​ပြင်​အ​ဆင် theme ​ဒီ​ဇိုင်း​လှ​ပ​ခြင်း၊ member ​များ​ကို ​အ​ဆင့်​များ ​တိုး​ပေး​နိုင်​ခြင်း​နှင့် ​ထိန်း​ချုပ်​ထား​နိုင်​ခြင်း ​တို့​အ​ပြင် chat room ​ကို​ပါ ​ထည့်​ပေး​ထား​ခြင်း​တို့​ကြောင့် ​လူ​သိ​များ​ပြီး ​အ​သုံး​များ​လာ​ကြ​ပါ​တယ်. ​မ​ကြာ​ပါ​ဘူး. ​လူ​သုံး​များ​လာ ​တာ​နဲ့ ​ရောင်း​စား​တော့​တာ​ပါ​ပဲ. ​အဲ့​ဒီ့​မှာ ​အ​ရင်​တုန်း​က​တည်း​က ​လုပ်​ထား​တဲ့ ​ဆိုက်​ပိုင်​ရှင်​များ ​ဒု​က္ခ​များ​ကုန်​တော့​တာ​ပါ​ပဲ. member ​တွေ​က ​များ​တော့ ​နှ​မျှော​ပြီး​တော့ ​ဆိုက်​ကို domain name ​နဲ့ ​ပြန်​ပြီး ​ဝယ်​ချင်​ကြ​ရော၊ ​ဝယ်​ဖို့​အ​ဆင်​ပြေ​တဲ့​သူ​များ ​အ​တွက် ​မ​ခက်​ခဲ​ပေ​မယ့်. ​ဝယ်​ဖို့​မ​လွယ်​ကူ​သူ​များ၊ ​ငွေ​ပေး​ချေ​မှု့ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​သူ​များ​ကြောင့် ​ဆိုက်​ကို ​ဒီ​အ​တိုင်း​ထား​ထား ​လိုက်​ရ​တဲ့ ​အ​ဖြစ်​မျိုး​နဲ့ ​ကြုံ​ရ​တဲ့ ​ဆိုက်​တွေ​လည်း ​အ​များ​ကြီး​ရှိ​ပါ​တယ်.
​အ​ခု​တ​တိ​ယ​က​တော့ www.mediafire.com ​ပါ​ပဲ. ​အား​လုံး​က ​အား​ကိုး​နေ​ရ​တဲ့ ​ဆိုက်​ဖြစ်​လို့ Mediafire ​ဟေ့ ​ဆို​ရင် ​မ​သိ​တဲ့​သူ ​မ​ရှိ​သ​လောက်​ပါ​ပဲ. hosting ​ထဲ​မှာ ​နာ​မည်​ကြီး​တာ ၂ ​ဆိုက်​ရှိ​ပါ​တယ်. ​တစ်​ခု​က www.megaupload ​ပါ. ​တစ်​ခြား hosting ​ဆိုက်​တွေ​မှာ ​အ​တူ​တူ​တင်​ထား​တဲ့​ကြား​က ​ဖိုင်​တွေ ​အ​ဖျက်​ခံ​ရ​တာ​တို့ ​ပျက်​သွား​တာ​တို့ ​ရှိ​ခဲ့​ရင်​တောင် megaupload ​ဆိုက်​က ​ဖိုင်​က​တော့ download ​လုပ်​လို့​ရ​နေ​ပါ​သေး​တယ်. ​အဲ့​ဆိုက်​က​တော့ ​အ​ခု ​အ​ရေး​ယူ​ခြင်း​ခံ​နေ​ရ​ပါ​ပြီ. ​ဒု​တိ​ယ ​ဖိုင်​ကို ​ကာ​လ​ကြာ​ရှည်​စွာ ​သိမ်း​ပေး​ထား​နိုင်​တဲ့​ဆိုက်​က​တော့ ​အား​လုံး​သိ​ကြ​တဲ့ Mediafire ​ပါ. Mediafire ​ဆိုက် ​လည်း​ပဲ. ​အ​ရင်​က​လို ​မ​ဟုတ်​တော့​ပါ​ဘူး. ​ရှေ့​က ​သူ​တွေ​နောက် ​ကောက်​ကောက်​ပါ​အောင် ​လိုက်​သွား​ပါ​ပြီ. Free user ​တွေ​ဆို​ရင် copyright ​ငြိ​လို့ ​ဖျက်​တာ​နဲ့ Download ​လုပ်​တဲ့​သူ ​မ​ရှိ​လို့ ​ဖျက်​တာ​နဲ့ ​ပျက်​ပျက်​သွား​တတ်​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​က​တော့ ​နည်း​နည်း​ဆိုး​တယ်​လို့ ​ပြော​လို့​ရ​ပါ​တယ်. Free user ​အ​နေ​နဲ့ ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို​တော့ ​ဖျက်​ချင်​ဖျက်​ပစ်​နိုင် ​ပေ​မယ့် ​တစ်​လ​ကို US 9$ ​ပေး​ပြီး premium Member ​အ​နေ​နဲ့ ​လ​စဉ် ​ငွေ​ပေး​ချေ​နေ​တဲ့ ​သူ​များ​အ​တွက် ​ကို​တော့​ဖြင့် ​အ​မြဲ​တမ်း ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​သိမ်း​ထား​ပေး​ပါ​မယ်​လို့ ​ကြေ​ငြာ​ထား​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော် mediafire ​မှာ ​ဒီ​နေ့​တင်​ရင် ​နောက်​နေ့ download ​လုပ်​လို့ ​မ​ရ​တော့ ​ပြန်​ပါ​ဘူး. ​တစ်​လ​ကို 9$ ​ပေး​ဖို့​က ​သိပ်​မ​ခက် ​ပေ​မယ့်​လို့. ​တစ်​လ​တစ်​လ​ကို ​ကျွန်​တော့်​အ​တွက် ​တောင်း​ဆို​ထား​တဲ့ software ​တွေ​ကို ​တင်​ပေး​ဖို့ ​ဝယ်​ထား​ရ​တဲ့ premium account ​တွေ၊ domain name ​နှစ်​စဉ်​ကြေး​တွေ​ဟာ ​အား​လုံး ​အိတ်​စိုက်​ချည်း​ပါ​ပဲ။ ​စာ​အုပ်​တွေ ​ဝယ်​တာ​တွေ ​အင်​တာ​နက်​လိုင်း​ဖိုး​တွေ ​မ​ပါ​သေး​ပါ​ဘူး. ​ဒါ​တွေ​ကို ​ဘာ​လို့​ပြော​ပြ​နေ​တာ​လဲ​လို့ ​မေး​ရင်. ​တစ်​ချို့​တွေ​တော်​တော်​များ​များ​က ​ကျွန်​တော် ​ဒီ​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​ရေး​နေ​တာ ​ပိုက်​ဆံ​တွေ​ရ​နေ​တယ် ​ထင်​နေ​လို့ ​ပြော​ပြ​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ပိုက်​ဆံ​မ​ရ​တဲ့​အ​ပြင် ​အိတ်​ဆိုက်​ပြီး ​ပ​ညာ​ဒါ​န ​ပြု​ပေး​နေ​တာ​ပါ. ​ဒီ​ကြား​ထဲ ​သူ​ငယ်​ချင်း​တစ်​ယောက်​က ​အ​ကြံ​ပေး​လို့ File hosting ​ဆိုက်​တစ်​ခု ​ဝယ်​ပြီး​တော့ ​ကို​ဝယ်​ထား​တဲ့ hosting ​ဆိုက်​က​နေ​ပဲ download link ​ချ​ပေး​မယ်​ပေါ့. ​အဲ့​အ​တွက် ​ဆိုက်​က​နေ ​လှူ​ချင်​တဲ့​သူ​များ ​ရှိ​ရင် ​လှူ​လို့​ရ​အောင် paypal bottom ​လေး ​ထည့်​ထား​လိုက်​ကြည့်​ပါ​လား​ဆို​လို့ ​ထည့်​လိုက်​မိ​ပါ​တယ်. ၂ ​ရက်​မ​ပြည့်​ပါ​ဘူး. ​အင်း​ညီ​နေ​မင်း​လည်း ​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​ဘန်း​ပြ​ပြီး​တော့ ​အ​လှူ​ခံ​တတ်​နေ​ပြီ​နော် ​လို့ ​ပြော​ရက်​တဲ့​သူ​တွေ​လည်း ​ရှိ​ပါ​သေး​တယ်. ​ကျွန်​တော် ​ဒီ​လို​လုပ်​တာ ​ကိုယ်​ကျိုး​တစ်​ခု​မှ ​မ​ပါ​ပါ​ဘူး. ​ညီ​နေ​မင်း ​အ​ခု​အ​ချိန်​အ​ထိ ​သူ​များ ​မ​ပေး​ချင်​တဲ့​ပ​စ္စည်း၊ ​မ​ပေး​ချင်​တဲ့ ​ပိုက်​ဆံ​ကို ​ဘယ်​တုန်း​က​မှ ​မ​ယူ​ခဲ့​ပါ​ဘူး. ​ကွန်​ပျူ​တာ၊ printer ​ပြင်​တာ ​နဲ့ ​တစ်​ခြား service ​တွေ​ကို​တောင်​မှ ​သူ​များ(၈၀၀၀)​ယူ​ရင် ​ကျွန်​တော် (၇၀၀၀)​ပဲ ​ယူ​တာ​ပါ. ​အဲ့(၇၀၀၀)​မှာ ​ဘာ​တွေ​ပါ​သ​လဲ​ဆို​ရင် ​လို​ချင်​တဲ့ Software (or) Games ​တွေ​ကို ​စက်​နိုင်​တယ်​ဆို​ရင် ​တင်​ပေး​တဲ့​အ​ပြင် Kaspersky internet security 2012 ​ကို update 100% ​ပြည့်​အောင်​အ​ထိ ​လုပ်​ပေး​လိုက်​ပါ​သေး​တယ်. kaspersky ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး update ​လုပ်​တာ ​ဘယ်​လောက်​ကြာ​တယ် ​မ​ကြာ​ဘူး​ဆို​တာ​တော့ ​သုံး​ဖူး​တဲ့​သူ​တိုင်း ​ပြော​ပြ​စ​ရာ​တောင် ​လို​မယ်​မ​ထင်​ပါ​ဘူး. ​ရိုး​ရိုး dial up ​နဲ့​ဆို​ရင် ​တစ်​နေ​ကုန်​ကို update ​လုပ်​ရ​ပါ​တယ်. ​ဒီ​မှာ ​အင်​တာ​နက်​က ​နာ​ရီ ၂​ဝ ​ကို ၁၀​ရ ​ဘတ် ​ပေး​ရ​ပါ​တယ်. ​မြန်​မာ​ငွေ​နဲ့​ဆို​ရင် ၃၀၀​ဝ ​နည်း​ပါ​ပဲ ​ဆို​ပါ​တော့​ဗျာ. ​ပိုက်​ဆံ​တောင်း​တဲ့ ​အ​ချိန်​မှာ​လည်း​ပဲ ၇၀၀​ဝ ​သာ ​တောင်း​တာ ​ပေး​တဲ့​သူ​က ​နည်း​နည်း ​ဈေး​များ​တဲ့​အ​နေ​အ​ထား​မျိုး ​စ​ကား​ဦး​သန်း​လာ​ရင် ၅၀၀​ဝ ​လောက်​နဲ့​ပဲ ​ယူ​လိုက်​ပါ​တယ်. ​လာ​ပြီး​ပြင်​တဲ့ customer ​တွေ ​ကြည်​ကြည်​ဖြူ​ဖြူ​နဲ့ ​ပေး​တဲ့ ​ငွေ​ကို​ပဲ ​ခု​ချိန်​အ​ထိ ​ယူ​ခဲ့​တာ​ပါ. ​အ​ပြင်​မှာ​လည်း ​ဒီ​လို ​ဝဘ်​ဆိုက်​ပေါ်​မှာ​လည်း ​ဒီ​လို​ပါ​ပဲ. ​အဲ့​လို ​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​ဘန်း​ပြ​ပြီး ​အ​လှူ​ခံ​တတ်​နေ​ပြီ​နော်​လို့ ​ပြော​ပြီး​က​တည်း​က Donate ​အ​စား ​ဝဘ်​ဆိုက်​အပ်​ရင် ​ပေး​လို့​ရ​အောင် Pay with Baht and Pay with $ ​ဆို​ပြီး​တော့ ​ခေါင်း​စဉ်​ပြောင်း​လိုက်​တာ​ပါ. ​အ​ခု​သင်​တဲ့ ​သင်​တန်း​က​လည်း​ပဲ ​ဘယ်​လောက်​အ​ထိ ​အ​ပင်​ပန်း​ခံ​ပြီး ​သင်​တယ်၊ ​ဘယ်​လောက်​အ​ထိ ​စေ​တ​နာ​ထား​ပြီး​လုပ်​တယ်​ဆို​တာ ​လာ​သင်​တဲ့ ​သင်​တန်း​သား​တိုင်း ​သိ​နေ​ကြ​မျာ​ပါ. ​ပိုက်​ဆံ ​မ​တတ်​နိုင်​ရင် ​မ​တတ်​နိုင်​သ​လို​မျိုး ​စီ​စဉ်​ပေး​ပါ​တယ်. ​ခု​အ​ချိန်​အ​ထိ ​သင်​တန်း​သာ ​ပြီး​သွား​တယ်. ​ပိုက်​ဆံ ၂၅၀၀​ဝ ​လောက်​နဲ့ ​ပြီး​သွား​တဲ့ ​သူ​တွေ​လည်း ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​သင်​တန်း​လာ​အပ်​ရင်​လည်း ​ငွေ​ကြေး​ထက် ​သင်​တန်း​ရဲ့ ​စည်း​ကမ်း​နဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ ​ပ​ညာ​ကို ​မ​ဖြစ်​မ​နေ ​လေ့​လာ​ထား​သင့်​ကြောင်း ​ဥ​ပ​မာ​တွေ​ပေး​ပြီး ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​တယ်. ​သင်​တန်း​ကြေး​ကို ​ပ​ထ​မ course ​ကို ​သူ​များ​တွေ ၅၀၀၀​ဝ ​ယူ​လို့ ​ကျွန်​တော် ၄၅၀၀​ဝ ​ပဲ ​ယူ​ထား​တာ ​များ​တယ်​လို့​များ​တော့ ​မ​အောက်​မေ့​လိုက်​နဲ့​နော်. ​ဒီ​မှာ ​မီ​တာ ​တ​ယူ​နစ်​ကို ​မြန်​မာ​ငွေ ၄၃၀-၄၅​ဝ ​ကြား​ရှိ​တယ်. ​တစ်​လ​တစ်​လ​ကို ​ဆိုင်​ခန်း​ခ ​မီ​တာ​ခ​နဲ့​ကို ၃ ​သိန်း​လောက်​ရှိ​တယ်. ​မ​လွယ်​ဘူး. ​ဒီ​မှာ ​တစ်​နှစ်​လောက် ​သင်​တန်း​က ​သင်​တန်း​သား​တွေ​ကို ​ကို​စွမ်း​အား​ရှိ​သ​လောက် ​မွေး​ထုတ်​ပေး​ခဲ့​ပြီး​ရင် ​တစ်​ခြား ​နေ​ရာ​တွေ​ကို​လည်း​အဲ့​လို​ပဲ ​ပြောင်း​ပြီး ​သင်​ပေး​ဖို့ ​အ​စီ​အ​စဉ်​ရှိ​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ကျွန်​တော် ​မ​သေ​ခင် ​အ​ဖြစ်​ချင်​ဆုံး ​ဆ​န္ဒ​ပါ. ​လူ​ဆို​တာ ​တစ်​နေ့​တော့ ​သေ​မှာ​ချည်း​ပါ​ပဲ. ​ကို​မ​သေ​ခင် ​အ​တတ်​နိုင်​ဆုံး ​ကောင်း​တာ​လေး​တွေ​လုပ်​ပြီး ​အ​များ​စိတ်​ချမ်း​သာ​အောင် ​ကူ​ညီ​ပေး​ပြီး ​ကု​သိုလ်​တွေ​ကို ​တ​မ​လွန်​အ​ထိ ​သယ်​သွား​ချင်​လို့ ​အ​ခု​လို​မျိုး ​ဒု​က္ခ​ခံ​ပြီး ​လုပ်​ပေး​နေ​တာ​ပါ. ​ဝဘ်​ဆိုက်​က​နေ ​ပိုက်​ဆံ ​ရ​လို့​မ​ဟုတ်​ပါ. ​ညီ​နေ​မင်း ​ပါး​စပ်​ပေါ်​မြက်​ပေါက်​သွား​ပါ​စေ. ​သူ​များ​စေ​တ​နာ​မ​ပါ​ပဲ ​ပေး​တဲ့ ​ပိုက်​ဆံ​ကို ​ခု​ချိန်​အ​ထိ ​ယူ​ဖို့ ​စိတ်​ကူး​ထဲ​တောင် ​မ​ထည့်​ဘူး​ဆို​တာ​ကို​တော့ ​သိ​ထား​စေ​ချင်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​လို​ခေါင်း​မာ​လို့​လည်း www.nyinaymin.com ​နာ​မည်​နဲ့ ​ပ​ထ​မ ​ဝဘ်​ဆိုက် ​ဆုံး​ရှုံး​ခဲ့​ရ​တာ​ပါ. ​ကျွန်​တော် ​ဒီ​လို​ပြော​လိုက်​လို့ ​အား​လုံး​ရဲ့ ​စိတ်​ထဲ​မှာ ​ဒွိ​ဟ​ဖြစ်​နေ​တာ​တွေ ​ရှင်း​သွား ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​လည်း​ပဲ File share hosting ​ဆိုက်​တွေ​ကို ​အ​ကုန်​လုံး ​လိုက်​ပိတ်​တာ​မျိုး​တွေ ​ဖြစ်​လာ​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​မ​လဲ ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​လို့ ​မေး​တဲ့​သူ​တွေ ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော် ​တတ်​နိုင်​တဲ့ ​ငွေ​အား ​လေး​နဲ့​တစ်​ဖက်​က​နေ ​ကူ​ညီ​ပေး​နေ ​တဲ့ ​ကို​စော​နဲ့​ကို​ရဲ ​တို​နှစ်​ယောက်​နှင့် ​ငွေ​အား​နှင့် ​ကျွန်​တော့်​ငွေ​အား ​ပေါင်း​ပြီး​တော့ ​နိုင်​သ​လောက် hosting server ​လေး ​တစ်​ခု​လောက်​ဝယ်​ပြီး ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​တင်​ပေး​ဖို့ ​စဉ်း​စား​ထား​ပါ​တယ်. ​အ​ခြေ​အ​နေ​က​တော့ ​မီးင်​ကြည့်​က​ရ​မယ့် ​အ​ဖြစ်​မျိုး​ဖြစ်​နေ​ပါ​ပြီ. ​တစ်​ခြား​သူ​များ​လည်း​ပဲ ​လှူ​ချင်​တဲ့ ​စိတ်​ဆ​န္ဒ​များ​ရှိ​ရင် ​လှူ​နိုင် ​ပါ​တယ် . .
​ပြီး​တော့ ​ကျွန်​တော့​ဝဘ်​ဆိုက်​ထဲ​မှာ ​နည်း​ပ​ညာ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​ပြီး ​ဝင်​ရေး​ချင်​တဲ့​သူ​များ​ရှိ​ရင် nyinaymin.org@gmail.com ​ကို ​မေးလ်​ပို့​ထား​နိုင်​ပါ​တယ်. ​ပ​ထ​မ user ​အ​ဆင့်​က​နေ admin ​အ​ဆင့် ​အ​ထိ ​ထား​ပေး​မှာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​ပြင် ​ဝယ်​ထား​တဲ့ cbox ​ကို ​ကိုင်​တွယ်​ထား​နိုင်​ဖို့​ကို admin ​အ​ထိ ​ကျွန်​တော်​နှင့် ​အ​တူ​တူ​လက်​တွဲ​ပြီး ​လုပ်​ဆောင်​နိုင်​ပါ​တယ်. ​အ​ထူး​သ​တိ​ပြု​ရ​မှာ​က​တော့ ​သူ​များ​ဆိုက်​က​နေ copy ​ကူး​ချ​ပြီး ​တင်​တာ​မျိုး​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​မိ​မိ​ကိုယ်​တိုင် ​ရေး​သား​ထား​တာ​တွေ​ကို​ပဲ ​တင်​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်. ​သူ​များ​ဆိုက်​ထဲ​က ​တင်​ထား​တာ ​ဟုတ်​မ​ဟုတ်​နဲ့ ​ကူး​ထား​တာ ​ဟုတ်​မ​ဟုတ်​ကို google ​က​နေ ​ရှာ​ရင် ၂ ​ခါ ​မ​ရှာ​ရ​ပါ​ဘူး. ​တန်း​တွေ့​ပါ​တယ်. ​ပြီး​တော့ ​ရေး​သား​သူ​နေ​ရာ​မှာ ​ရေး​သား​တဲ့​သူ​ရဲ့ ​နာ​မည်​ပဲ ​ပေါ်​မှာ​ပါ. ​ကျွန်​တော့်​နာ​မည် ​မ​ပေါ်​ပါ​ဘူး. ​ကိုယ့်​ဟာ​ကို ​ကြိုက်​တဲ့​နာ​မည်​ပေး​ထား​လို့​ရ​ပါ​တယ်.
​ဖိုင်​ဖြေ​ရာ​မှာ ​ဒီ​လို error ​က ​ဘာ့​ကြောင့်​ဖြစ်​တာ​လဲ.
dhamma dajaးsoftware ​တွေ​များ​သော​အာ​ဖြင့် ​ဒီ​လို​တွေ​ပဲ​ပြ​နေ​ပါ​တယ် ​ကို​ညီ​ရယ်​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ခ​ဏ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး​နော်..
​အ​ကို​ရေ screen capture ​ဖတ်​ပေး​တဲ့​အ​တွက် ​ကျေး​ဇူး​ပါ​လို့ ​အ​ရင်​ပြော​ပါ ​ရ​စေ​ဗျာ. ​အ​ခု​လို error ​ကို ​ဘာ​ဖြစ်​လို့ ​ဖြစ်​လာ​တာ​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော်​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ part1, part2, part3 ​အ​စ​ရှိ​သ​ဖြင့် ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​တ​ကယ်​တော့ ​အဲ့​လို ​အ​ပိုင်း​လေး​တွေ ​ခွဲ​ထား​ပေး​တာ​ဟာ ​မြန်​မာ​ပြည်​က ​ညီ​အစ်​ကို ​မောင်​နှ​မ​များ​အ​တွက်​ဆို​ရင် ​မ​မှား​ပါ​ဘူး. ​ကျွန်​တော့်​အ​နေ​နဲ့ ​မြန်​မာ​ပြည်​က ​အင်​တာ​နက် speed ​က​သာ ​အ​ရမ်း​မြန် ​နေ​ရင် ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင်​ကို ​တစ်​ခါ​တည်း​နဲ့ ​တင်​ပေး​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​မြန်​မာ​ပြည်​က ​အင်​တာ​နက် speed ​က ​လိပ်​က​တောင် ​အ​ဘ​ခေါ်​ရ​လောက်​တဲ့ speed ​ဆို​တော့​လည်း 50 MB ​လောက်​ရှိ​တဲ့​ဖိုင်​ကို ၃ ​ဖိုင်​လောက် ​ခွဲ​ပြီး ​တင်​ပေး​နေ​ရ​ပါ​တယ်. ​မ​ဟုတ်​ရင် download ​လုပ်​နေ​ရင်း​က​နေ ​လိုင်း​ကျ​သွား​လို့ ​ပြုတ်​ကျ ​သွား​ခဲ့​ရင် ​အ​စ​က​နေ ​ပြန်​ပြန်​ပြီး 50 MB ​လုံး​ကို ​ဒေါင်း​ဒေါင်း​နေ​ရ​ရင် ​ပြီး​မှာ​ကို ​မ​ဟုတ်​တော့​ပါ​ဘူး. ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် 50 MB ​ရှိ​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို 20 MB ​စီ​နဲ့ ၃ ​ဖိုင်​ခွဲ​ပြီး​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ. ​တင်​ပေး​တဲ့​ဖိုင် ​အား​လုံး​ကို download ​လုပ်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ဆို​လို​တာ​က​တော့ ​တင်​ပေး​တဲ့ ifile.it | Mediafire | Mirrorcreator ​စ​တဲ့ ၃ ​နေ​ရာ​က​နေ ​ကြိုက်​တဲ့​ဆိုက်​က​နေ​သာ download ​လုပ်​ပါ. ​အ​ဓိ​က​က Part3 ​အ​ထိ ​ရှိ​တယ်​ဆို​ရင် Part1, Part2. Part3 ​သုံး​ပိုင်း​ကို ​ရ​ဖို့​သာ ​အ​ဓိ​က​ပါ. ​ဖိုင်​အား​လုံး​က hosting ​လို့​ခေါ်​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ ​တင်​ပေး​လို့ ​ရ​တဲ့​ဆိုက်​နာ​မည်​တွေ​သာ ​ကွဲ​ပြား​သွား​တာ​ပါ. ​တင်​ပေး​တဲ့ ​ဖိုင်​က​တော့ ​အ​တူ​တူ​ပါ​ပဲ. ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့်​မို့​လို့. ​ဘယ်​ဆိုက်​က​နေ Download ​လုပ်​လုပ်. ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ ​အ​ပိုင်း​တွေ​အား​လုံး​ရ​လာ​ရင် ​ဘယ်​ဖိုင်​ကို​ပဲ ​ဖြေ​ဖြေ ​မူ​ရင်း​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင် ​ထွက်​လာ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​တော့ ​သိ​စေ​ချင်​တာ​က ​အ​ပိုင်း ၃ ​ပိုင်း​တင်​ပေး​ထား​ရင် ၃ ​ပိုင်း​စ​လုံး​ကို download ​လုပ်​ထား​ပြီး ​ဖြေ​မှ​သာ ​မိ​မိ​လို​ချင်​တဲ့ software (or) ebook ​ကို ​ရ​ရှိ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တ​ယယ်. ​တစ်​ပိုင်း​တည်း​ကို download ​လုပ်​ယုံ​နဲ့ ​မ​ရ​ပါ​ဘူး. ​နောက်​ပြီး​တော့ ​ပြော​ပြ​ဖို့ ​ရှိ​ပါ​သေး​တယ်. ​ကျွန်​တော် mediafire ​က​နေ ​ဖိုင်​တွေ ​တင်​တင်​ပေး​ပါ​တယ်. ​အ​ခု mediafire ​က ​ပြန်​ပြန်​ပြီး ​ဖျက်​ဖျက်​ပစ်​ပါ​တယ်. ​ဒါ​က ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​မှ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​ဆိုက်​တိုင်း​နီး​ပါး​ကို ​လိုက်​ဖျက်​နေ​တာ​ပါ. ​အဲ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​တစ်​ခြား​ဆိုက်​က​နေ ​တင်​ပေး​မယ်. ​ပြီး​ရင် ​နောက်​ထပ် ​ကောင်း​တဲ့ file share hosting ​ဆိုက်​တစ်​ခု​က​နေ ​တင်​ပေး​မယ်​လို့ ​ဆုံး​ဖြတ်​ထား​ပါ​တယ်. ​မ​ရ​ဘူး ​မ​ရ​ဘူး​ချည်း​ပဲ ​ကျွန်​တော့်​ကို ​အ​ပြစ်​တင်​နေ​တာ ​ဘာ့​ကြောင့် ​အဲ့​လို ​ဖြစ်​ရ​တယ် ​ဆို​တာ​ကို ​အ​ဖြေ​မ​ရှာ​တတ်​လို့​ပဲ​လို့ ​ကျွန်​တော်​ယူ​ဆ​လို့ ​ပြော​ပြ​လိုက်​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အ​စ​က​တည်း​က ​ပြော​ပြ​ထား​ပြီး​သား​ပါ. ​အွန်​လိုင်း​ဥ​ပ​ဒေ ​ထွက်​နေ​ပါ​တယ်. file share hosting server ​တွေ​ကို ​လိုက်​ပြီး ​ကန့်​သတ်​နေ​တယ်. ​သ​တိ​ပေး​နေ​တယ်. copyright ​နဲ့​ငြိ​တဲ့ ​ဖိုင်​ပါ​လာ​ရင် ​ဆိုက်​ပိုင်​ရှင်​က ​ဖျက်​ပစ်​လိုက်​ပါ​တယ်​လို့ ​ပြော​ပြ​ထား​ပြီး​သား​ပါ. ​အ​ပစ်​တင် ​မ​စော​ပဲ​နဲ့ ​ယ​ခု​လက်​ရှိ ​အင်​တာ​နက်​မှာ ​ဘာ​တွေ ​ဖြစ်​နေ​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​အ​ရင်​ဆုံး ​လေ့​လာ​ပြီး​မှ ​အ​ပြစ်​တင်​ပါ ​လို့​ပြော​ပါ​ရ​စေ. ​ပြီး​တော့ license version ​ဖြစ်​အောင် ​လုပ်​တဲ့​နည်း ​အ​သုံး​ပြု​တဲ့​နည်း​ကို video file ​အ​နေ​နဲ့ ​အ​သေ​အ​ချာ​ကို ​ရှင်း​ပြ ​ပြော​ပြ​ထား​ပါ​တယ်. ​အဲ့​ဒီ့ ​လေး​နည်း​စ​လုံး​ကို ​ကျွမ်း​ကျင်​နား​လည်​ရင် ​လိုင်​စင်​ဗား​ရှင်း ​ဖြစ်​အောင် ​လုပ်​တတ်​သွား​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ဆိုက်​ညာ​ဖက်​အ​ခြမ်း​မှာ ​မြန်​မာ​စာ​နဲ့​ရိုက်​ရင် ​မ​ပေါ်​မှာ​စိုး​လို့ photoshop ​နဲ့ ​ပုံ​အ​နေ​နဲ့​အား​လုံး​မြင်​လို့၊ ​ဖတ်​လို့၊ download ​လုပ်​လို့​ရ​အောင် ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်.
Mediafire ​ဆိုက်​အ​ကြောင်း​နှင့် ​ရင်​ထဲ​က​ပြော​ချ...
​ဖိုင်​ဖြေ​ရာ​မှာ ​ဒီ​လို error ​က ​ဘာ့​ကြောင့်​ဖြ...